အဆိုပါ Bulkans တက် bulking ။ Tera Adria Technologies ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်ကတိကိုဖြစ်စေသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » အဆိုပါ Bulkans တက် Bulking ။ tera အာဒြိ Technologies ကမိတ်ဖက်ဂတိတော်ကိုဆောင်တတ်၏
အဆိုပါ Bulkans တက် Bulking ။ tera အာဒြိ Technologies ကမိတ်ဖက်ဂတိတော်ကိုဆောင်တတ်၏
အော့တဝါ, ON - FileCatalyst, စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းအတွက်Emmy®ဆုရရှေ့ဆောင်တစ်ဦးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဦးဆောင်အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ချန်နယ်အသစ်တစ်ခုမိတ်ဖက်, tera အာဒြိ Technologies က၎င်းတို့၏မိတ်ဖက်အစုစုကိုပေါင်းထည့်ပြီးပါပြီယနေ့ကြေညာခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်ဆားဘီးယား (ဘဲဂရိတ်) တွင်အခြေပြု, tera အာဒြိ Technologies ကဘော်လကန်ကျွန်းဆွယ်ဒေသအတွက်ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းမှဖြေရှင်းချက်၏တစ်ဖွဲ့လုံးအိမ်ရှင်ဆောင်တတ်၏ (အယ်လ်ဘေးနီးယား, ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား, ဘူလ်ဂေးရီးယား, ခရိုအေးရှား, ဂရိ, ကိုဆိုဗို, သမ္မတနိုင်ငံ မက်ဆီဒိုးနီးယား, မွန်တီနီဂရိုး, ရိုမေးနီးယား, ဆားဘီးယားနှင့်ဆလိုဗေးနီး) ။ tera အာဒြိရဲ့အဓိကအာရုံစူးစိုက်မီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများခေတ်မီလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းကြောင်းအိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်များ၏ပေါင်းစည်းမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ tera အာဒြိရဲ့အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကအိုင်တီ၏ 20 နှစ်ပေါင်းဒေသတွင်း၌အကြီးမားဆုံးအများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုပေးအဖြစ်တီဗီထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံကိုအဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောအတှေ့အကွုံကိုအခြေခံပြီးထက်ပိုရှိပါတယ်။
tera အာဒြိ Technologies ကအတူပူးပေါင်းထားပါတယ် FileCatalyst ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးမထိခိုက်စေဘဲ, ဖိုင်လွှဲပြောင်းအမြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့ရှာဖွေနေသူတို့ရဲ့ဖောက်သည်ထုတ်လွှင့်နည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်ပေး။ အဆိုပါ FileCatalyst စိတ်မချရ bandwidth ကိုဆက်သွယ်မှုသို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်ပထဝီအကွာအဝေးကျော်ကြီးမားတဲ့ဖိုင်တွေလွှဲပြောင်းနေချိန်တွင်ပလက်ဖောင်း packet ကိုအရှုံးနှင့်အောင်းနေချိန်မှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုမကြာခဏတကမ္ဘာလုံးပူးပေါင်းသူကို tera အာဒြိ Technologies က '' ဖောက်သည်တွေအများကြီးများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်။ အီးမေးလ်နှင့် FTP ကိုများကဲ့သို့ရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများတိုးပိုကြီးတဲ့ဖိုင်အရွယ်အစားအတူတက်ထားရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေစဉ်, FileCatalyst မည်သည့်ဖိုင်သို့မဟုတ်အရွယ်အစားလွှဲပြောင်း 10 Gbps ရောက်ရှိနိုင်သောအမြန်နှုန်းမှအရှိန်ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။
"ကျနော်တို့ကရုပ်သံလိုင်းမိတ်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစုစုကိုမှ tera အာဒြိ Technologies ကထည့်သွင်းဖို့အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကမီဒီယာနှင့်ထုတ်လွှင့်အာကာသအတွင်းအတွေ့အကြုံရှိဖြေရှင်းချက်ပေးသူများမှာနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤထပ်မံဒေသတွင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ရှေ့မှောက်တွင်ခိုင်ခံ့စေဖို့မျှော်လင့်ထား, "အလန် Atkinson များအတွက်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု & Marketing ကို၏ဒုတိယသမ္မတကပြောပါတယ် FileCatalyst.
"tera အာဒြိ Technologies ကမိတ်ဆက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ပါသည် FileCatalyst ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များတိုးမြှင့်ဖိုင်လွှဲပြောင်းအမြန်နှုန်းရှာကြံဖို့, "tera အာဒြိ Technologies ကမှာ Nenad Čukalović, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာဆိုင်ရာအရာရှိချုပ်ကပြောပါတယ်။ "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်သူတို့ပြီးသားအရပျ၌ရှိသည် bandwidth ကိုကောင်းလာတာပါတဲ့အရှိန်ဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်ပြုစုလျက်, ပါပြီ FileCatalyst အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။ "
ပိုမိုလေ့လာသင်ယူလိုသူများအတွက် IBC2017 မတက်ရောက်သူတို့အဘို့, FileCatalyst စက်တင်ဘာလ 2017-7 ကနေခန်းမ 21 အတွက် IBC7, Booth B21 (15.B19) မတက်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ကထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့၏တစ်ခုလုံးကို suite ကိုပြ, အဖြစ် tradeshow ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတိုက်ရိုက်ပို့လိုက်ကြတယ်ပေးခြင်းပါလိမ့်မည်။
အကြောင်းအရာ FileCatalyst, Inc
အော့တဝါ, ကနေဒါ, တည်ရှိသော FileCatalyst စီမံခန့်ခွဲဖိုင်လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်အရှိန်မြှဖိုင်လွှဲပြောင်းဖြေရှင်းချက်၏ခေါင်းဆောင်အနိုင်ရကာEmmy®ဆုအတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ 2000 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီအများအပြား Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကုမ္ပဏီများမှအဖြစ်စစ်တပ်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင်တစ်ဦးထက်ပိုတထောင်မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေးအတွက်ဖောက်သည်များ, စွမ်းအင် & သတ္တုတူးဖော်ရေး, ဂိမ်းနှင့်ပုံနှိပ်, ရှိပါတယ်။ FileCatalyst လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖိုင်လွှဲပြောင်းအရှိန်အဟုန်မြှင့်ခြင်းနှင့်စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီဇိုင်းဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါတယ်။ FileCatalyst အောင်းနေချိန်နှင့် packet ကိုအရှုံး FTP, HTTP ကို, ဒါမှမဟုတ် CIFS တူသောရိုးရာဖိုင်လွှဲပြောင်းနည်းလမ်းများအပေါ်ရှိသည်သောဆိုးကျိုးများမှကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုသုံးပါ FileCatalyst အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေခြင်း၊ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် www ကိုသွား။filecatalyst.com သို့မဟုတ် Twitter @ ပေါ်တွင်FileCatalyst.
tera အာဒြိနည်းပညာဘဲဂရိတ်အတွက်ဇွန်လ 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်က TV နဲ့ရေဒီယိုထုတ်လုပ်မှု၏လယ်ပြင်တွင်အာဒြိဒေသသစ်ကိုစိတ်ကူးများနှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ၏စျေးကွက်ထုတ်လွှင့်ဖို့ကိုရောက်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်မီဒီယာလုပ်ငန်းခေတ်သစ်လိုအပ်ချက်များအတွက်အိုင်တီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြေရှင်းချက်၏ပေါင်းစည်းမှု၏လယ်ပြင်၌တည်ရှိ၏။ မီဒီယာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့ Cloud ကိုဝန်ဆောင်မှုများကိုအသိအမှတ်ပြုမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ကအိုင်တီအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးလယ်ပြင်၌အတှေ့အကွုံ 20 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုရှိသည်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မြင့်မားအဆင့်အထိပေါ်န်ဆောင်မှုများပြည့်စုံတစ်စုံကိုဆက်ကပ်ခြင်းနှင့်ကဲ့သို့သောအဆုံးထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးတိုးမြှင့်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့သညျဤစျေးကွက်ထဲကိုတင်ပြရန်ဆန္ဒရှိသည့်န်ဆောင်မှုများနေသောခေါင်းစဉ်: system ကိုဖြေရှင်းနည်းများ, ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, ထောက်ခံမှုများနှင့်လေ့ကျင့်ရေး၏အတိုင်ပင်ခံနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု, သတ်မှတ်ချက်တွင်, ဝယ်ယူခြင်းနှင့်တပ်ဆင်၏ဒီဇိုင်းကို။ ကျွန်တော်တစ်ဦးတီဗီထုတ်လုပ်မှုနောက်ခံရှိသည်အဖြစ်ကျနော်တို့အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်အရာ, လုံလောက်သောနှင့်ထိရောက်သောပံ့ပိုးကူညီမှုဘို့လိုအပ်ကြောင်း၏အပြည့်အဝသတိပြုမိကြသည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ IBC 2017 ပေါင်းစည်းမှု SoftAtHome, MStar, CES2017 တီဗီနည်းပညာ က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2017-08-31
ယခင်: Telemedia မှာ (Pty) LTD မှ၎င်းတို့၏ပြည်တွင်းစစ်ဆင်ရေးများအတွက် FileCatalyst Choses
နောက်တစ်ခု: FileCatalyst နှင့် video signal အီတလီ Market ကမှ File Transfer Acceleration ယူခဲ့